Aichi Prefecture izangoma-yokomoya apreyizali umbono (Nagoya, njalo njalo)
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Aichi Prefecture izangoma-yokomoya apreyizali umbono (Nagoya, njalo njalo)
Ukwazisa iinkonzo yovavanyo umbono izangoma ngokomoya ukuba zingaba Aichi Prefecture. Nagoya neuropathy yinkonzo rhoqo bacinge ukuba bahamba Akumangalisi oku.
appraisers kunye neenkonzo enikelwe apha isishwankathelo ulwazi njongo kwi umnatha, oko akuthethi ukuba uvandlakanyo, ezifana akhabayo kunye navumelanayo.
◆ indlela yayo eya kuthi ukuba ukukhanya
imbono yokomoya Maya kukuba kuyahluka, Maya Yamamoto le Umvandlakanyi utsho. Abanye abantu ndayibonayo iliso phakathi izangoma, ngubani na Sekiru oomoya emoyeni kunye ulusu, abantu abaziva isandi kunye namazwi, kodwa kuyabulala, ngokulandelelana, uMnu Maya Yamamoto Kusemandleni ngesimilo le yindlela engaqhelekanga ukwenza uvavanyo umbono ngokomoya. Jonga igama kuphela, umoya, Kakade ke, nayo khangela ibuhlungu, ewe sinako ukubona elidlulileyo, ngoku nakwixesha elizayo. ixabiso
ayinayo ixesha kuphela embonweni ngokomoya 100 million yen. nibe ngabantu ofuna ukuthetha phezu kancinci ngocoselelo isikhathi lembandezelo enkulu. Ezifana Nonhlanhla yenye intlawulo.
-ofisi e Nagoya, Aichi Prefecture Midori-ku Narumi-cho, unako ukuhamba ukusuka Narumi Meitetsu Station. Ukusuka Otaka Station of the Tokaido Shinkansen mncinane kakhulu, kodwa akulindelekanga kwi ukuhamba kwaye kuhamba umgama.
◆ Nagoya ofisi inkonzo yeengcebiso yengqondo "isithunywa wenyanga"
https: //www.tukinotenshi. com / ummeli
eIkeda HanaHisashisato wehlabathi inkuthazo enamandla ndisemncinane, kubonakala ukuba sele une utyalo ngomthamo. Kwakhona izinyanya nezalamane, umbingeleli oyintloko okanye shaman, indela, izangoma, shaman, abongikazi Nonhlanhla, abongikazi ngeshologu, njl, izinto umntu uyithengileyo baqhele ukuba babe izangoma. Okwangoku ukusebenza njenge Umvandlakanyi yamagqala nje ngembali lovavanyo engama-20.
uphawu into bathi eyayikrolwe ukuphelisa inxalenye intiyo zangaphambili emphefumlweni kwaye wena ngendlela yokuzenza ebizwa-ngumtshangatshangiso ezisixhenxe utyando care ukukhanya, umfanekiso kwabo kuhle ukuba umphefumlo kunye nencum. Amazinga
ubuso-to-face-apreyizali Umbono kokomoya yemizuzu engama-30 5000 yen. Kukho ii-ofisi
Uchiyama, Aichi Prefecture, Chikusa-ku, Nagoya. R., i ibhasi, ukusuka metro Chikusa Station ngoko nangoko.
nxamnye isithunywa yokuphilisa salon "Rabianrozu"
nyanga yinkonzo khaphukhaphu ◆ intliziyo, uMnu eIkeda ebizwa ngokuba "Rabianrozu" nenkonzo amalungiselelo umzimba kwakhona esebenza salon impiliso.
ubuhle yobuso kunye ekunciphiseni, ubuhle, imilenze, kukho menu ezifana nkovu yokuthanjiswa ze-ngumtshangatshangiso ezisixhenxe utyando care ukukhanya.
◆ UHiroko uMnu
kunxweme UHiroko uMnu Oki isekelwe e Nagoya kwakhona eyaziwa ngokuba owayemele i abadumileyo ezahlukeneyo kwi izangoma. Seiko ne Yu Hayami Matsuda, Yukiko Okada, Shinobu Terajima ngokunjalo, kufuphi nonxweme uMnu Kukho kwakhona imfundiso leyo owayemele.
ngoku, ukuba unikeza inkonzo esebenzisa i-apreyizali umbono ngokomoya yaye izangoma akaziwa. org / wiki /% E6% B2% 96% E7% B4% 98% E5% AD% 90
kunxweme UHiroko kuthethwa eyaziwa ngokuba owayemele i abadumileyo ezahlukeneyo izangoma ohlala kwaye osebenza Nagoya. Seiko ne Yu Hayami Matsuda, Yukiko Okada, Shinobu Terajima ngokunjalo, kufuphi nonxweme uMnu Kukho kwakhona imfundiso leyo owayemele.
ngoku, ukuba unikeza inkonzo esebenzisa i-apreyizali umbono ngokomoya yaye izangoma akaziwa. Ngelosi com /
ngenyanga kanti inkonzo sokutyhilela intliziyo, uMnu eIkeda uye wasebenza ephilisa salon ebizwa ngokuba "Rabianrozu" njenge nkonzo ukulungiselela umzimba.
ngoku, ukuba unikeza inkonzo esebenzisa i-apreyizali umbono ngokomoya yaye izangoma akaziwa.